လက်နက်ကြီးကျလို့ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးသူငယ်များ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ
လက်နက်ကြီးကျလို့ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးသူငယ်များ ထိခို...
21 ต.ค. 2562 - 18:05 น.
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသက ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်နဲ့ ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွေမှာ လက်နက်ကြီး ကျည်ကျရောက် ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးနဲ့ ကလေးတစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
ဒဏ်ရာရသူတွေကတော့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ထဲက ထိပ်ထူးပေါက် မူဆလင်ကျေးရွာက ဒေါ်အာယေရှားနဲ့ ရသေ့တောင်မြို့နယ်ထဲက ဆင်ခုန်တိုင် ကျေးရွာက အသက် ၃၀ အရွယ်အမျိုးသမီးနဲ့ သူ့ ကလေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။
လက်နက်ကြီးကျည်ကျတာကြောင့် ဒေါ်အာယေရှားရဲ့ ညာဘက်ခြေထောက်မှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရခဲ့သလို သူမွေးထားတဲ့ နွားတစ်ကောင်နဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ကိုပါ ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ထိပ်ထူးပေါက် မူဆလင်ကျေးရွာဟာ ဘူးသီးတောင်မြို့ရဲ့ တောင်ဘက်မှာ ရှိတဲ့ ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပြီး မနေ့က အဲဒီနယ်မြေအတွင်းမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာ မရှိပဲ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေ ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံရွာသားတွေက ဆိုပါတယ်။
ကျေးရွာတွေအတွင်း လက်နက်ကြီးကျည်ကျရောက် ပေါက်ကွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းဦးစီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းဇော်ဦးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေမယ့် မေးမြန်းလို့ မရခဲ့ပါဘူး။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် နွားရုံတောင်မှာ အခြေစိုက်ထားတဲ တပ်မ ၂၂ လက်အောက်ခံ ခမရ ၂၀၉ ကနေ လက်နက်ကြီး နှစ်ချက်ပစ်ခဲ့ပြီး ရသေ့တောင်မြို့နယ် ဆင်ခုန်တိုင်ရွာကို ကျရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ AA ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ခိုင်သုခက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ဘူးသီးတောင် ဥယျာဉ်သာရွာ မီးလောင်မှု ဆန်နဲ့ ကျွဲနွားတွေပါ ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆို
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမှာ ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့ လူငယ်တစ်ဦး သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ခံရ
ဘူးသီးတောင်မှာ အဖမ်းခံရတဲ့ ကျောင်းဆရာကို အကြမ်းဖက် ဥပဒေနဲ့ အမှုဖွင့်
ထိပ်ထူးပေါက်ကျေးရွာဟာ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် တောင်ဘက်ပိုင်းက ကျောက်ရံအုပ်စု အတွင်းမှာရှိပြီး စံဂိုးထောင်၊ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံ စတဲ့ ကျေးရွာတွေနဲ့ အနီးဝန်းကျင် ကျေးရွာတစ်ရွာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက မြို့နယ်တော်တော်များများမှာ တပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် အေအေတို့အကြား တိုက်ပွဲတွေ အပြင်းအထန် နေကြသလို ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် အတွင်းမှာလည်း တိုက်ပွဲတွေ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေ အတွင်းမှာတော့ တပ်မတော်ဘက်က ရဟတ်ယာဉ်နှစ်စီးနဲ့ ပစ်ခတ်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပေမယ့် အဲဒီရဟတ်ယာဉ်တွေဟာ ပစ်ကူပေးနေတာ မဟုတ်ကြောင်းနဲ့ ကင်းထောက်တဲ့ ရဟတ်ယာဉ်တွေ ဖြစ်တယ်လို့ အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းဦးစီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းဇော်ဦးက ငြင်းဆိုထားပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်နေ့မှာလည်း ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် အရှေ့မြောက်ဘက် ငါးမိုင်ခန့်အကွာ အုတ်တောင်ကျေးရွာအနား မနက်ပိုင်း ၇ နာရီလောက်က တစ်ကြိမ်၊ နေ့လည် ၁၁ နာရီ လောက်မှာ တစ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်း အရပ်သားထိခိုက် သေဆုံးမှုတွေဟာ မြင့်တက်လာနေပြီး သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ငြင်းဆိုနေကြတာတွေကို တွေ့နေရပြီး အခုလိုမျိုး ပြည်သူတွေ ထိခိုက်သေဆုံး နေကြရတဲ့အပေါ်မှာ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ တာဝန်ယူစေချင်တယ်လို့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သောင်းရွှေက တိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။
မနေ့က ညနေပိုင်းအထိ လက်နက်ကြီးတွေ ပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက် တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ တပ်မတော် တာဝန်ရှိသူတွေကို မေးမြန်းခဲ့ရာမှာတော့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားတာ မရှိဘူးလို့ တပ်မတော်ဘက်က ထပ်မံငြင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေအတွင်း သေဆုံးခဲ့သူတွေဟာ တဖြေးဖြေး တိုးပွားလာနေပြီး အသက် ၆၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး၊ အောက်တိုဘာ ၈ ရက်နေ့ညမှာပဲ အသက် ၇၀ ကျော်အရွယ် အဖွားအိုတစ်ဦးနဲ့ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မသန်စွမ်းသူတစ်ဦး၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ကျောက်တော်မြို့နယ်မှာ အသက်၅၃ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
อัลบั้มภาพ လက်နက်ကြီးကျလို့ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးသူငယ်များ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ